सम्पत्ति शुद्दिकरण सरकारले गर्ने कि कान्तिपुरले ?-Setoghar
सम्पत्ति शुद्दिकरण सरकारले गर्ने कि कान्तिपुरले ?
मैले यसपूर्व लेखेको एउटा टिपोटलाई लिएर गरिएको टिप्पणीको कारण मैले यो लेख लेख्न बाध्य हुनुपरेको कुरा पनि बुझिदिन मित्रहरुमा अनुरोध छ। हामीले पढिरहेको कान्तिपुरको इतिहास लामो नभए पनि यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा राम्रो उचाई लिन सकेको थियो तर यसको अहिलेको गतिविधिले त्यो लोप हुने अवस्थामा पुग्नु पनि अनौठो हुनेछैन । संचारले राज्यको चौथो अंगको स्थान पाएको भएपनि यसले एकजना व्यापारीलाई पत्रिकाको मालिकसंगको कारोवारलाई लिएर पटक-पटक गाली गलौज गर्ने र अनावश्यक समाचार बनाएर यसका हज्जारौँ ग्राहकको दिमाग चाट्ने अपराधमा यो कान्तिपुर मुछिएको छ ।
अजय सुमार्गी र यसका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाको लेनदेनको कुरालाई लिएर सुमार्गीको व्यवसायिक अवस्था नै धाराशायी पार्ने सम्मको प्रयाश यो पत्रिकाको पाउनुलाई यसका सम्पूर्ण ग्राहकले खेद व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सोल्टीमा कान्तिपुरका सिराेहियाले २ करोडको माग गरेपछि सुमार्गीले दिन नसक्ने भनिदिएछन् त्यसकै भोलिपल्टको कन्तिपुरमा सुमार्गीले २२ अरव सम्पत्ति घोटाला गरेकाे भनेर मुख्य शिर्षक बनाउन पनि लाज मानेनन् । के उनले २ करोड दिएको भए सुमार्गीको कुनै दोष थिएन भन्ने थिए त ?
अर्कालाई सिध्याउन खोज्दा आफै खाल्टाेमा जाकिने अवस्था पनि आउन सक्छ । किनभने सम्पत्ति सुद्धिकरण भनेको सरकारको कुरा हो, छानविन गर्ला । सुमार्गीले आफूले गरेको कारोवारवाट भएको आम्दानीको कर तिरेका छन् छैनन् ? त्यसको छानवीन गर्ने काम त सरकारको हो । सुमार्गी यो देशका रष्ट्रियपूँजिपति हुन् । उनले विदेशमा नभएर यसै देशमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनका उद्योग व्यवसायमा सयौंले रोजगारी पाएका पनि छन् । के यि सवै बन्द गराएर रोजगारी पाउनेको समेत रोजीरोटी हरण गर्न खोजेका हुन् त सिरोहियाले ।
ट्याक्स हेभेन देशहरुवाट के हामीले कारोवारै गर्न नमिल्ने हो र ? यो त त्यहाँका जनताको लागि सरकारले दिएको छुट होईन । यदी त्यसै कम्पनीवाट रकम ल्याएको भए पनि त नेपालमा नियमित रुपमा त्यसको आम्दानीमा कर तिरेको छ की छैन, त्यो रकम ल्याउन स्वीकृति छ कि छैन ? यति मात्र होईन र ? सरकारले हेर्ने ?
पत्रिकाले त देशलाई नोक्सानी छ छैन सरकार के गर्दैछ सर्वसाधारणलाई समेत जानकारीमा ल्याएर सचेत र सुसुचित गराउने मात्र न हो । यो नगरेर कैलास शिरोहियाले अजय सुमार्गी संग आफ्नो लेन देनको रिस फेर्न सुमार्गीको व्यवसायनै धरापमा पुर्याउने गरि कान्तिपुको मुखपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिरहनु कतिको स्वाभाविक कुरा हो ? यसो गरिरहँदा यसका हज्जारौँ ग्राहक उनको झगडाको समाचार पढ्न बाध्य भएका पनि छन् । यो सिरोहियाले कान्तिपुरका ग्राहक माथि गरिएको घोर अपमान हो ।
जहाँसम्म विदेशी पैसा नेपाल भिर्त्य्राईएको कुरा छ त्यसलाई त राम्रो अनुगमन गरेर उद्याेगमा लगाउँदा कसले फाईदा लिन्छ ? यो कुरा के पत्रिकालाई थाहा छैन । खालि उद्यमीसंग पत्रिकाको आडमा दलाली गरेर फाईदा लिने गरि यस्तो समाचार लगातार संप्रेषन गरिरहनु पत्रिकाकै लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा सिरोहियाले बुझ्न सके उनकै लागि पनि राम्रो हुने थियो । जहासँम्म विदेशवाट रकम ल्याउने कुरा सुमार्गीले गरेका छन् त्यो राम्रो काम हाे । समृद्द नेपाल र सुखी नेपाली बन्ने हाम्राे सपनाकाे लागि ।